ड्यूश बैंकले मंगलबार पहिलो पटक मंदीको सुरुवाती पहिलो हस्ताक्षर गरे? मार्टिन भिजल्याण्ड
तपाईले यो पाउनुभयो; ड्यूश बैंक (डीबी) मा मासिक layoffs। अप्रत्याशित, हजारौं कर्मचारीहरूले सोमवार सोमबार उनीहरूको इस्तीफे पत्र पाएका थिए र उनीहरूले दया बिना यस्तो गर्न सकेनन् तुरुन्तै भवन छोड्नुहोस्। लापरवाहीको सबैभन्दा ठूलो तरंगहरू लन्डन र वाशिंगटन डीसीमा हिट भए, तर संसारभरका हजारौं ठाउँमा पनि हराइरहेको थियो। कुल मिलाएर, 18.000 लाई तिनीहरूको काम छोड्न र अर्को वर्ष अनुमति दिइएको थियो 74.000 कर्मचारीहरूमा कुल कमी हुनेछ। त्यो एक ठूलो फुटबल स्टेडियम पूर्ण छ र प्रभाव निश्चित छ, किनकि लन्डनमा मात्र 3000 कर्मचारीहरू अचानक आफ्नो बंधक वा भाडा तिर्न असक्षम हुन सक्छ किनभने नयाँ कामको मौका बिल्कुल उच्च छैन।
यो उल्लेखनीय छ कि यस्तो बैंक अचानक समय काट्न सुरु हुन्छ जब अर्थव्यवस्था पनि अर्थव्यवस्था संग राम्रो छैन। जस्तै कि यस्तो बैंकमा सैकड़ों अरबहरूको बाहिर, श्रम लागतमा दसौं लाखौं खर्च समुद्रमा बस एक ड्रप होइन। जहाँसम्म मलाई चिन्ता छ, हामी यहाँ देख्न सक्ने संकटको लक्षणहरू लामो समयसम्म योजना बनाई रहेको छ, जुन सानो धक्का दिइनेछ। यद्यपि हामी यसो भन्न सक्छौं कि युनाइटेड किंगडमको लगभग 65 लाख जनसंख्यामा केही हजार पुरुषहरू वास्तवमा ठूलो प्रभावको होइनन्, हामी स्नोबल प्रभावलाई कम गर्दैनौं।
ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पहिले देखि नै एक स्ट्यान्डल मा आउँछ। अभिभावकले रिपोर्ट गरे जुलाई3मा। निम्न:
सात वर्षमा पहिलो पटक, बेलायतको अर्थव्यवस्थाले पहिलो क्वार्टरमा एक संकुचनको अनुभव गरेको छ (विस्तृत अध्ययन रिपोर्टहरू) किनभने कुनै सम्झौता ब्रेक्सिटको खतरा भनेको स्टाइलिङ व्यवसाय हो।
यूकेको प्रभुत्व सेवा क्षेत्रमा वृद्धि लगभग जुन जूनमा रोकिएको थियो। यो एक महिना को लागि ब्लीक आउटलुक को पुष्टि गर्दछ जसमा उद्योग र निर्माण उद्योग विपरीत दिशा मा फेंक रहे हो।
तथ्याङ्कले संकेत गर्दछ कि यूएनएई अर्थतन्त्र तीन महिनामा 0,1% को आसपासमा अनुबंधित भएको छ जुन आईएचएस मार्केट र चार्टर्ड इन्स्टीट्यूट प्रोभरेन्स एन्ड सप्लाइट (सीआईपी) भन्छ, मासिक सर्वेक्षणमा लेखिएको छ।
अर्थव्यवस्थाको स्वास्थ्यको लागि अलार्मले बजिरहेको छ, अब ब्रिटेनले 31 अक्टोबर भन्दा पहिले ईयूलाई छोड्ने आशा गरेको छ। यदि यो प्रक्रिया तेस्रो क्वार्टरमा तुरुन्तै रिवर्स छैन भने, देश ब्रेक्सित भन्दा पहिल्यै मंदीमा हुनेछ।
यूएसका तथ्याङ्कहरू पनि खतरनाक छन्, जस्तै हामी वेबसाइटमा हेर्छौँ alt-market.com (पढ्नका लागि क्लिक गर्नुहोस्):
महत्वपूर्ण संकेतकहरु जस्तै आवास मार्केट 7,8% द्वारा बिक्री को सामान्य गिरावट र 8,1% द्वारा मूल्यहरु मा गिरावट देखि ग्रस्त हुन्छ।
कार बिक्री चार वर्षमा सबैभन्दा कम दरमा दौडिरहेको छ, जबकि कार ऋण मा ब्याज बढ्दै गएको छ।
हामी उपभोक्ता उपभोक्ता ऋण र कर्पोरेट ऋणको ऐतिहासिक स्तर देख्छौं। हामी विशाल स्टोर स्टोर बन्द गर्छौं (यस वर्ष अब सम्म 7100 समापनहरुको घोषणा गरिएको छ), शिपिंग र भाडा मा एक कमजोर रोक, वैश्विक विनिर्माण पीएमआई मा एक निचले बिंदु, कम से कम पीएमआई पछि यूएन विनिर्माण उद्योग पछि 2009 र सरकारी ब्यान्ड चार्ट, एक ईर्ष्यामा।
यसका साथ हामी वास्तविकतामा पुग्यौं कि मैले यहाँ धेरै लामो समयको साइटमा भविष्यवाणी गरेको छु: योजना बनाई संकट, जुन हानिको दोषीले नियन्त्रण विपक्षीहरूको जूतामा राखिनेछ: आत्म-निर्मित दाई-विंग राष्ट्रवादी आन्दोलनमा ' आफ्नै देश पहिलो 'दृष्टिकोण। यो प्रक्रिया जानबूझै एक लामो समयको लागि योजना बनाईएको छ, ट्रम्प र ब्रेक्सिट धाराहरु लाई अमेरिका र यूके मा क्रमशः सत्तामा आउँछ, र त्यसपछि अर्थव्यवस्था दुर्घटनाग्रस्त छ, ताकि राष्ट्रवाद, सुरक्षावाद र (नियन्त्रण विरोधी) को निश्चित रूप देखि ) 'साजिश विचारहरू' र बाँकी जनसंख्या अब देखि यस समूहलाई '40 /' 45 वर्षको एनएसबी सदस्यको रुपमा हेर्नेछन्। यसैले सडक अपेक्षित (र लामो योजना बनाई) अराजकताबाट नयाँ अर्डरमा पूर्ण रूपमा खुला छ। यो 'Ordo ab Chao' को पुरातन रोमन खेल हो (हाम्रो अनुहार पहिले अज्ञात देखेर अराजकता को आदेश बाहिर)।
यदि तपाईं विश्व सरकार निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईलाई समाजमा आलोचनाको बारेमा सजग हुनु पर्छ। त्यसोभए भन्दा राम्रो हुन सक्छ कि यो महत्वपूर्ण समूहले शक्ति प्राप्त गर्न र समर्थनमा बढ्न सक्छ, सम्पूर्ण आवाजको रेटिनालाई स्पष्ट रूपमा स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुहोस्, र त्यसपछि संसारलाई आर्थिक आपदामा पुर्याउन र यसैले निश्चित रूपमा समाप्त हुन्छ। त्यो महत्वपूर्ण समूहसँग गिनिन्छ? त्यो नियन्त्रित विरोधको खेल हो।
यो समय तपाईं हेर्न को लागि कि तपाईं Trumanshow वास्तविकतामा हुनुहुन्छ; त्यो संसार एक स्पष्ट लिपि अनुसार चलाइएको छ र माथिको सानो समूहले यो लिपिको एक निश्चित दिशा पठाउन उत्प्रेरित गर्दछ। साधारण तथ्य यो हो कि म पढाई र यस प्रक्रिया को भविष्यवाणी गरदै एक लामो समय को लागि साइट मा एक संकेत हो कि मिथकहरु को घोषणा गरदैछन यहां हुन सक्छ। प्रत्येक विकास जुन तपाईं लगभग हरेक दिन पछ्याउन सक्नुहुनेछ यो को प्रमाण प्रदान गर्दछ। एकमात्र प्रश्न यो छ कि तपाईंले सम्पूर्ण माध्यमबाट हेर्नु अघि यो जगेडा गर्न कत्तिको लाग्छ।
तपाईं यो गलत वास्तविकता र स्क्रिप्टमा सबै कुरा पाउन सक्नुहुनेछ यो लेख र लिङ्क गरिएको लेख। समस्या लिनुहोस् र राम्रो तरिकाले अध्ययन गर्नुहोस्।
स्रोत लिङ्क सूची: zerohedge.com, theguardian.com, guardian.com
निगेल फरेजले इस्तीफा गरे, ब्रेक्सिट पावर वैक्यूम र वित्तीय अराजकताको लागि मनोविज्ञान थियो
ब्रेक्सिट र सरकारी संकट अधिक ईयू शक्तिको प्रति आदर्श तरीका हो
ब्रिटिश हाउस ओन कमन्स अस्वीकृत पछि ब्रेक्सिट को अनुमानित अन्त
ट्याग: संकट, DB, ड्यूश बैंक, विशेष, मास्सा, निकालियो, मंदी
10 जुलाई 2019 मा 12: 24
बीचमा, केवल नयाँ टेक्नोलोजीमा 13 बिलियन पंप गर्दै ... त्यसैले पैसा त्यहाँ थियो
11 जुलाई 2019 मा 11: 09
माथिको लेखमा म दसौं लाख मजदूरी खर्चको बारेमा कुरा गर्दैछु। निस्सन्देह, यदि तपाईं 18k मान्छे आगो लगाउनुहुन्छ र तपाई अनुमान गर्नुहुन्छ कि उनीहरूले सबै वर्ष प्रति वर्ष एक टनको औसत खर्च गर्छन्, त्यो वार्षिक एनएनएनएक्सएमक्स अरब हो। र यदि तपाईं अन्तमा धेरै मानिसहरूलाई आगो लगाउनुहुन्छ भने, यो तल जान्छ। यद्यपि, तपाईं आफैलाई सोध्न सक्नुहुन्छ कि ती मानिसहरू यो समयमा गरिरहेको छ। निस्सन्देही तिनीहरू यति दुर्व्यवहारमा छन् कि यसले बैंकको दैनिक-दिनको अपरेसनलाई प्रतिकूल असर पार्दैन, अन्यथा एकले स्वचालित रूपमा प्रक्रियाहरू स्वचालित रूपमा प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्न सक्षम पर्दछ, तर होइन ... एक दिन अर्कोबाट अर्कोबाट सुरु गर्न सक्छ र त्यसैले जाँगरमा कुनै प्रतिकूल असर पर्दैन। के ती मानिसहरू उनीहरूको नाक रोजेका छन्?
10 जुलाई 2019 मा 13: 30
क्यान्सर रूप देखि, तर चाँडै सबै केहि गिरता छ, अधिक 'मौका' कि दास अन्ततः स्क्रिप्ट को केटाहरु को बिरुद्ध खेलेंगे। दासहरू अझै राम्रो समय रहेका छन् र सबैको लागि पर्खिरहेका छन्।
10 जुलाई 2019 मा 14: 03
यदि तपाईंले मन्त्रालयको बारेमा मेरो पछिल्लो लेख पढ्नुभएको छ भने, तपाईंले त्यो मौकालाई अधिकृत गर्नु हुँदैन
10 जुलाई 2019 मा 15: 04
त्यो मौका 0% हो।
10 जुलाई 2019 मा 16: 38
हामीले वर्षौं अघि भविष्यवाणी गरेका थियौँ कि यो प्रायः डीबी, केन्द्रिय प्लानरहरूको पूर्वनिर्धारित योजनाको साथ सुरु हुनेछ। सूर्यको अधीन कुनै नयाँ कुरा, कार्डको घर गोरखा जाँदै जाँदा टाढाबाट हेर्नुस्। ऋणमा बनेको एक अर्थव्यवस्था (बंधक / बंधक / अङ्ग्रेजी सहित) असफल हुन बिग्रेको छ।
« तपाईको वरिपरी धेरै मानिसहरु को शाब्दिक सूक्ष्म (अञ्चल निकाय) हो?
'अहू' ए ए प्रोग्राम हो जसले मानव-अवतार बायो-रोबोटको स्वत: पालट भरिएको छ »
कुल भ्रमण: 11.634.261